ओलीको मौन व्रत, पार्टीमा खुलदुली – Puleso
ओलीको मौन व्रत, पार्टीमा खुलदुली
By:Puleso3 Published Date: सोमवार, माघ २९, २०७४
भुसको आगो झैं भित्रभित्रै फैलिरहेको एमालेको आन्तरिक द्वन्द्व मुख्यमन्त्रीको चयनसँगै सतहमै प्रकट भएको छ । एमालेले सात प्रदेशमध्ये चार वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री हात पारेको थियो । तर चारवटै अध्यक्ष ओली पक्षले हातमा लिएको छ ।
माधव नेपाल पक्ष पूरै किनारा लागेको छ । मुख्यमन्त्री चयन प्रकरणपछि माधव नेपाल पक्षका नेताहरुको राजनीति करिब करिब समाप्त भएको छ । खासगरी प्रदेश ३ मा पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य सामान्य कार्यकर्ता डोरमणि पौडेलबाट भारी मतअन्तरले पराजित भएपछि माधव पक्षको अब पार्टीभित्र खैरियत छैन भन्ने देखिएको हो ।
गत शुक्रबार सम्पन्न निर्वाचनमा ओलीका उम्मेदवार पौडेलले ३४ मत प्राप्त गरे भने नेपाल पक्षीय शाक्यले जम्मा २४ मत प्राप्त गरिन् । विविध कारणले गर्दा प्रदेश ३ मा एमालेले अष्टलक्ष्मीलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने अनुमान गरिएको थियो ।
पहिलो कारण थियो–पार्टीलाई सफल बनाएर राजनेता हुने चरणमा प्रवेश गरेका अध्यक्ष ओलीले गुटगत स्वार्थ राख्दैनन् भन्ने । दोस्रो कारण थियो– प्रदेश सभामा निर्वाचित एमाले सांसदमध्ये उपाध्यक्ष शाक्य सबैभन्दा सिनियर हुन् ।
तेस्रो कारण थियो – जुन प्रदेशमा जुन जातिको बाहुल्यता छ, सकेसम्म त्यही जातिको नेतालाई मुख्यमन्त्रीको रुपमा अघि सार्ने नीति एमालेले कागजमा उल्लेख गर्नु । चौथो कारण थियो– संविधानको मुख्य मर्मका रुपमा समानुपातिक समावेशिता उल्लेख हुनु र सात प्रदेशमध्ये प्रदेश ३ मा मात्रै महिलाले मुख्यमन्त्रीका रुपमा दाबी गर्नु ।
यी चार वटा बलिया कारण रहँदा रहँदै पनि एमाले अध्यक्ष ओली गुटगत संकीर्णताभन्दा माथि उठ्न सकेनन् । सात प्रदेशमध्ये एउटामा पनि महिलालाई मुख्यमन्त्री बनाउन नसकेको, पार्टीभित्र योगदान र निरन्तरताको कदर गर्न नसकेको आरोप एमाले अध्यक्ष तथा भावी प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लागेको छ ।
प्रदेश ३ को विषयलाई लिएर ओलीको पार्टीभित्र मात्रै होइन, बाहिर पनि विभिन्न टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ । समाचार स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री चयन प्रक्रियामा एमाले अध्यक्ष ओलीले बुद्धि पुर्याउन नसकेकै कारण फसेका हुन् ।
एमालेको भागमा परेका चार वटा मुख्यमन्त्रीमध्ये दुई वटा अर्थात् प्रदेश १ र ३ मा माधव पक्षले मागेको थियो । तर प्रदेश १ मा शेरधन राईलाई सर्वसम्मत गरे, प्रदेश ३ मा शाक्यलाई सर्वसम्मत गराइदिने प्रस्ताव ओली पक्षले अघि सार्यो ।
तर प्रदेश १ मा चुनावमा गए पनि आफ्नो पक्षका भीम आचार्यले जित्नेछन् र सिनियर भएका नाताले अष्टलक्ष्मीले व्यक्तिगत ताकतमा पनि चुनाव जित्नेछिन् भन्ने कुरा माधव नेपाल ढुक्क भए । तर चुनावले त्यो परिणाम दिएन । प्रदेश १ मा भीम आचार्य दुई मतले पराजित भए ।
प्रदेश ३ मा यसै पनि ओली पक्ष बलियो थियो । त्यसमाथि पनि आन्तरिक असन्तुष्टिका कारण राजेन्दै पाण्डेले पनि ओली पक्षलाई नै सहयोग गरे । माधव पक्षको अंकगणित फेल भयो भने अध्यक्ष ओली गुटगत संकीर्णताभन्दा माथि उठ्न नसकेको पुष्टि भयो ।
प्रदेश ५ मा भने ओली पक्षका शंकर पोखरेल सर्वसम्मत चयन भइसकेका छन् । प्रदेश ४ का दुवै प्रतिस्पर्धी किरण गुरुङ र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ओली पक्षकै हुन् । यतिबेला ओली संसदीय दलमा बहुमतमा छन्, तर चारै वटा मुख्यमन्त्री एकलौटी गरिएको प्रकरणका कारण उनको बहुमत गुम्ने सम्भावना पनि त्यतिकै देखिएको छ ।
माओवादीसँग पार्टी एकीकरण गर्नसाथ संसदीय दलमा ओलीको बहुमत गुम्ने सम्भावना एमालेभित्रै औंल्याइएको छ । प्रतिनिधिसभातर्फ एमालेका १२१ मध्ये ओली पक्षका ७२ र माधव पक्षका ४९ जना छन् । एकीकरणमार्फत माओवादीका ५३ जना मिसिएपछि १७४ जना हुनेछन् ।
माधव पक्षीय ३९ ले प्रचण्डलाई साथ दिएको अवस्थामा प्रचण्ड सजिलै बहुमतमा पुग्नेछन् । अर्थात् १७४ मध्ये प्रचण्डको १०२ हुनेछ । अहिले अध्यक्ष ओलीले भित्तामा पुर्याएको बदला पार्टी एकीकरणलगत्तै लिने विषयमा माधव नेपाल र झलनाथ खनालबीच छलफल चलिरहेको छ ।
यो छलफलमा वामदेव गौतम पनि मिसिएका छन् । पार्टी एकीकरणपछि संसदीय दलको नेताका रुपमा प्रचण्डलाई अघि बढाएर बदला लिने माधव पक्षको भित्री खेलबारे अध्यक्ष ओली बेखबर छैनन् । यसैकारण उनले पार्टी एकता भाँड्न आफ्ना पक्षका नेताहरुलाई भित्रभित्रै परिचालन गरिरहेका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष नपाए प्रचण्डले एकीकरण गर्न मान्दैनन् भन्ने ओलीलाई थाहा छ । प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष पद आफैंले लिने अडानबाट ओली एक कदम पनि पछि हट्ने अवस्थामा छैनन् । यो अवस्थामा पार्टी एकीकरण सम्भव छ कि छैन त ?
शुक्रबार साँझ नेपाल टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने ओलीजी र ममध्ये एक जना प्रधानमन्त्री र एकजना पार्टी अध्यक्ष रहने पूर्वसहमति हो, यो सहमतिभन्दा बाहिर गएर पार्टी एकीकरण हुँदैन । पार्टी एकीकरण भएन भने के हुन्छ ?
भन्ने प्रश्नमा प्रचण्डले भने पार्टी एकीकरण नभए पनि एमाले र माओवादीबीचको गठबन्धन सरकार बन्न नसक्ने चाहिँ होइन, तर त्यस्तो सरकार स्थायी हुँदैन, पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार बनोस् भन्ने जनचाहना हो ।
सुरुमा सरकार गठनका लागि ओलीलाई साथ दिन पनि पार्टी एकीकरण नभए त्यो साथ दीर्घकालीन हुन नसक्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमा बताइसकेका छन् । यति हुँदा हुँदै पनि पार्टी एकीकरणमा ओलीले जाँगर नचलाउनुको मुख्य कारण भोलि माधव पक्षले साथ दिएर प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता बनाइहाल्छन् कि भन्ने डर हो ।
अर्को कारण हो–माओवादीले साथ नदिए मधेसी दलको साथ दिलाइदिने बचन ओलीलाई भारतको संस्थापन पक्षले दिनु । संघीय समाजवादी फोरम र राजपामध्ये कुनै एउटा मधेसी दलले साथ दिए पनि ओलीलाई बहुमत पुग्छ ।
आफ्नै बोलीका कारण प्रधानमन्त्री बन्ने समय एक महिना लम्बिएपछि एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले यतिबेला मौन व्रत धारण गरेका छन् । करिब दुई सातादेखि उनले लिएको मौन व्रतले पार्टीभित्र खुलदुली मच्चाएको छ भने कुटनीतिक निकायल आफ्नो प्रयास सार्थक भएको बताइरहेको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको मतगणना जारी रहेकै बेला एमालेले अग्रता हासिल गर्दै आएपछि ओलीले भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन नयाँ सरकार आएपछि हुन्छ, त्यसैले अध्यादेश स्वीकृति नगर्न म राष्ट्रपतिसमक्ष आग्र गर्छु, साथै वर्तमान सरकारले नियुक्ति गर्ने प्रदेश प्रमुखहरुसँग हाम्रो पार्टीका सांसदले सपथग्रहण गर्ने छैनन्, त्यसैले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि यो सरकारले सिफारिस गर्यो भने त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न पनि म राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गर्छु ।
ओलीको यो दबाबपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले लामो समयसम्म राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश अड्काएर राखिन् । सरकारले पनि लामो समय प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्न सकेन । राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेश रोकिँदा र सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न नसक्दा नयाँ सरकार गठनका लागि संवैधानिक संकट देखियो ।
किनकि संविधानको धारा १८४ को उपधारा ८ मा स्पष्ट लेखिएको छ– राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक परिणामलाई अन्तिम रुप दिन सकिनेछ ।
तर ओलीको आग्रह बमोजिम राष्ट्रपतिले अध्यादेश अड्काउँदा र ओलीको धम्कीपछि सरकारले समयमै प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न नसक्दा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन सकेन ।
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुन नसक्दा प्रतिनिधिसभाको परिणाम आउन सकेन, जसका कारण नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई महिना बितिसक्दासमेत अघि बढ्न सकेको छैन ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश नअड्काएको भए र प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा ओलीले अवरोध खडा नगरेको भए माघको पहिलो साताभित्रै ओली प्रधानमन्त्री बनिसक्ने थिए । सातै प्रदेशमा त्यतिबेलै सरकार बनिसक्ने थियो ।
आफ्नै बोलीका कारण आफैं प्रधानमन्त्री बन्न ढिलो भएपछि ओलीलाई मान व्रत धारण गर्न निकटस्थ तथा शक्ति केन्द्रबाट सुझाव आएको छ, तरणमा उल्लेख छ ।
एकै दिन तीन तीनवटा कार्यक्रममा पुग्ने र अन्ट सन्ट बोल्ने ओली थाइल्यान्ड भ्रमणपछि मौन देखिएका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत जान छाडेका छन् । कतिपयले उनको मौन व्रतलाई कांग्रेसमा सरकार बनाउने योजनाका रुपमा अथ्र्याएका छन् ।न्यूजअभियान
गृह मन्त्रालयले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाथि निगरानी बढाएको छ। पछिल्ला दिनमा भौतिक संरचनासहित व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि विप्लव विस्तृतमा...
बुधबार कांग्रेसका भातृसंस्थाहरूले कांग्रेस नेतृत्वको निवर्तमान सरकारले पत्रकारसम्मेलन गरी राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले मनोनयन नगर्नु संविधानको मर्म विस्तृतमा...